Maxaad ka taqaanaa biladaha Nobel Prize? | Somaliska
Maanta ayaa waxaa si rasmi ah u bilowday shaacinta cida ku guuleysatay biladaha Nobel, iyadoo ugu horeyn la shaaciyay cida ku guuleysatay bilada Daawada, iyadoo isbuuca inta ka dhiman la shaacin doono qeybaha kale ee bilada, hadaba halkaan waxaaan ku eegaynaa taariikhda biladaha Nobel iyo sababt ka dambaysa.
Biladaha Nobel waa kuwo aad caan uga ah caalamka, oo loo aqoonsanyahay bilida ugu qiimaha badan adduunka. Laakiin maxaad ka taqaanaa ninka abuuray biladan? Alfred Bernhard Nobel waxa uu ku dhashay Stockholm, Sweden 21-kii Oktoobar 1833. Waxa uu ahaa nin Iswiidhish ah oo ahaa Saynisyahan, Injineer, Hal Abuure, Nin hubka sameeya iyo asagoo alifay maadada laga sameeyo qaraxyada.
Alfred Nobel ayaa go’aanka in uu sameeyo Biladaha Nobel gaaray ka dib markii walaalkiis ku dhintay Faransiiska, iyadoo warbaahinta Faransiisku qoreen in uu ganacsadihii dhimashada geeriyooday.
Aasaaskii bilad sharafka Nobel Prize waxa uu ahaa sanadkii 1895, ayadoo Alfred Nobel uga tagay dhamaan dhaqaalihiisii oo gaarayay ilaa 250 milyan oo dolar. Maadaama uusan Alfred wax dhaxal ah u reebin qaraabadiisa ayaa dood ka dhalatay bilada Nobel, iyadoo maxkamad laysla tagay. Biladiii ugu horeysay ayaa la bixiyay sanadkii 1901. Ilaa 1901 bilada ayaa waxay sharaftay rag iyo dumar aad horumar uga sameeyay xaga Fiisigiska, Kimistriga, luuqadaha, nabada iyo hada oo lagu daray dhaqaalaha.
ilaa 3000 kun oo qof ayaa loo doortaa in ay ka qayb noqdaan musharaxiinta biladaha Nobel sanadkiiba. Dadka loo magacaabo musharaxnimada looma sheego in ay musharax yihiin, magacoodana lama sheego. Doorashada qofka helaya bilada ayaa waxaa cod u qaada macaahida ay quseyso iyadoo qofka codka ugu badan hela la siiyo bilada.